ग्यास्ट्राइटिसका लक्षण, समस्या र उपचारका विषयमा डाक्टरसँगकाे कुराकानी
शनिवार, फाल्गुन ११, २०७५ ०२:३१:५०
सोमवार, श्रावण २८, २०७५ न्यूजमिसाइल
आजकल खानपानका कारण हरेक व्यक्तिमा ग्यास्ट्राइटिस नभएको मानिस पाउँन हम्मे हम्मे पर्छ र यस रोगको उपचारका विधिहरु अनेक भएको पाउँछौ । ग्यास्ट्राइटिस रोग उपचारका लागि अस्पताल तथा क्लिनिकहरु यत्रतत्र रुपमा पाइन्छ ।
हो यसै विषयमाथि प्रस्तुत छ द ओेर्ल्ड ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजी हस्पिटल एन्ड इन्स्टिच्युट, मुम्बईका वरिष्ठ ग्यास्ट्रोइन्टेरोलिजिस्ट विपुल रोय राथोडसँगको विस्तृत संवाद :-
तपाईं लामो समयदेखि ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजीको बारेमा अध्यन, अध्यापन अनि अनुसन्धान सङ्गसङ्गै बिरामीको उपचार पनि गर्दै आउनु भएको छ । सबै मानिसले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजि भनेको के हो ?
कुनैपनि प्राणी जिउनको लागि उसभित्र हुने पाचन प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानिन्छ । जब खाएको खानेकुराबाट शरिरले पोषण तत्व लिन्छ, तबमात्र शरीरभित्र कार्यहरु संचालन हुने गर्छन् ।
खानेकुरा मुखबाट भित्र पठाएपछि आवश्यक तत्वलाई शक्तिको रुपमा परिणत हुने र अनावस्यक वस्तुलाई शरीर बाहिर फाल्ने सम्मको अध्ययन नै इन्टेरोलोजी हो र यो अध्ययन गर्ने मानिसहरु नै इन्टेरोलोजिस्ट हुन् ।
पछिल्लो समयमा ग्यास्ट्राइटिस नभएका मानिसहरु भेटाउन गार्हो पर्दछ, यसको अर्थ यो समस्या सबैमा साझा जस्तै भएको देखिन्छ। यो किन हुन्छ र छुटकारा कसरी पाउन सकिन्छ ?
खानपिनमा ध्यान नदिनु ग्यास्ट्राइटिसको प्रमुख कारण हो । अमिलो डकार आउनु, पेट फुल्लनु, खान मन नलाग्नु यो समस्याका लक्षण हुन् । सहरिया जीवनशैली ग्रहण गर्नु अनि शारीरिक कसरत नगर्नु नै यो समस्या सबैमा साझा जस्तै भएको हो ।
यसबाट बच्नको लागि दिनमा ५/६ पटक खानेकुरा थोरै थोरै खाने, चिल्लो पिरो मसला भएको खाना नखाने, मध्यपान तथा धुमपान नगर्ने, शारीरिक व्यायाम नियमित गर्ने गर्नुपर्छ ।
ग्यास्ट्राईटिस बिग्रे अल्सर अनि अल्सर बिग्रे क्यान्सर भन्छन नि,के यो सत्य हो ?
सामान्यतया यो भनिएतापनि कुनै बेला सिधै क्यान्सर तथा अल्सर पनि देखिन्छ । जो मानिस नियमित शरीर जाँच गराउछ, उसलाई ग्यास्ट्राइटिस तथा अल्सर भएको थाहा हुन्छ अनि क्यान्सर हुन सक्छ भन्ने डर हुन्छ तर धेरै मानिस अति नै भएपछि मात्र डाक्टर कहाँ जाने हुँदा, क्यान्सर समेत भैसकेको हुन सक्छ ।
पछिल्लो समयमा क्वाक डाक्टर अर्थात नक्कली डाक्टरको बिगबिगी देखिन्छ, उपचार गराउन जाँदा कसरी विस्वास गर्ने कि डाक्टर साच्चिकै डाक्टर नै हो भनेर ?
कुनै पनि डाक्टर राम्रो हो भने बजारमा नाम अरुले लिई नै रहेका हुन्छन् । यो एउटा माध्यम भयो । कोहि नयाँ ठाउँमा छौं भने जाँच गर्न जानुभन्दा पहिला डाक्टरको बारेमा केही कुरा जानौ कि डाक्टरले के मा विशेषज्ञता हासिल गरेको हो, कहाँबाट अध्ययन गरेको हो आदि । यो गर्न सकेमा सक्कली डाक्टरलाई नै भेट्न सकिन्छ । यसो गर्न सक्ने हो भने डाक्टर पनि होसियार हुन्छन् अनि मनपरि गर्न सक्दैनन् ।
तपाईं विस्वका विभिन्न देशका डाक्टरलाई प्रशिक्षण दिदै आउनु भएको छ । आफ्नै हस्पिटल खोल्नु भएको छ मुम्बईमा । रोगले ग्रसित परेका विरामीलाई आर्थिक रुपमा पनि ग्रसित गर्ने धेरै अस्पताल छन् । तिनीहरुको विचमा तपाईको हस्पिटलमा फरक के त?
हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा के भने हामीमा भएको सम्पूर्ण शक्ति एक ठाउँमा लगाउँदा र फरक फरक ठाउँमा लगाउदा देखिने भिन्नता हेर्ने हो भने एकै ठाउँमा लगाएको शक्तिले दिने फल सर्वोत्कृष्ट हुन्छ ।
हो हामीमा फरक पनि यहि हो कि हामी मात्र ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजिमा काम गर्छौ । त्यसैले गर्दा नेपाल अनि अरु विभिन्न देशबाट विरामी सेवा लिन हामी कहाँ आउछन् ।
प्रकाशित मिति: सोमवार, श्रावण २८, २०७५, १०:०८:००
किसान आफै मालिक हुन् : कृषि बजार तथा व्यापार व्यवस्था बोर्डका प्रमुख पौडेल
सोमवार, भदौ ४, २०७५ न्यूजमिसाइल
लाईसेन्समा प्वाल नपर्ने गरि काम गर्दैछुः वडाअध्यक्ष श्रेष्ठ पञ्चायतकालमा जेवि टुहुरे र रामेश लगायतका जनवादी गायकहरुबाट प्रभावित्
शनिवार, श्रावण २६, २०७५ न्यूजमिसाइल